Ukuphupha ngokudanisa Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Umculo kunye nomdaniso zibalulekile kwaye ziyonwabisa ngokwenzela abantu abaninzi. Ngale ntshukumo yesingqi ukuya kwisandi somculo, ungalibala iinkxalabo zakho kwaye wenze abahlobo abatsha, kuba bambalwa kakhulu abakhetha ukudanisa bodwa. Abo bafuna ukwenza umdaniso onzima ngakumbi batyelela isikolo somdaniso; Utitshala wokudanisa ufundisa abafundi bakhe amanyathelo afanelekileyo.
Nokuba yi-waltz okanye i-salsa, i-polka, i-cheerleader, i-hip-hop, okanye i-cha-cha-cha, zininzi iindlela zokudanisa. Ayinamsebenzi ukuba sijija, ukubhavuma, ukungxama okanye ukutsiba, umdaniso udlale indima ekhethekileyo kwimbali yoluntu, hayi ukuhambisa nje ixesha. Kwezinye iinkcubeko, imidaniso yesiko yinxalenye yesiko.
Uya kufumanisa ukuba ungumdanisi ophuphayo ukuba uphanda ngononophelo ngephupha lakho lomdaniso.
1 Uphawu lwephupha «umdaniso» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umdaniso» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umdaniso» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umdaniso» - ukutolikwa ngokubanzi
Xa sishukumisa umgangatho wokudanisa ephupheni okanye sidanisa ngokukhawuleza okukhulu, la mava ahlala efuzisela a ukukhululwa. Ukuba iphupha liyadanisa xa ulele, oku kuphakamisa ukuvisisana kwangaphakathi, uvuyo kunye neemvakalelo eziphilayo.
Kweminye imidaniso, enje nge tango, nawe unakho zesondo Izixhobo zitsho kwakhona. Olunye ulwazi ngumanyano kumdaniso, kuba nabani na okhokela umdaniso njengesibini uya kuseta ithoni kubudlelwane.
Ukuba uzibona ungqengqa wedwa ephupheni kwaye, umzekelo, unyikima kwindawo yedisco, oku kubonisa umnqweno wokuqwalaselwa ngakumbi ngumntu othile kunye i-nostalgia emva kobambiswano. Ukuba umntu uphupha ukuba uyadanisa yedwa, kunyanzelekile ezesondo. Ukuba iphupha lingqungqa lizilibale ngokupheleleyo, ke ulonwabo lunokulilindela ngothando, nangona kunjalo, kunokuba yinto engapheliyo.
Ukuba iphupha likhokelwa kumdaniso ngelixa ulele, oku kuphakamisa ukuba kufuneka uye kwimeko ethile. Ukuba umdaniso wenzeka emtshatweni, ungaphezulu komfanekiso wephupha elibi. Kule meko kukho umngcipheko we-duel kunye ukungenisa.
Ukuba udanisa ngentambo njengokuhamba ngentambo kwiphupha lakho, kuya kufuneka uqaphele ukuba ukulingana kwengqondo yakho kusengozini ekuvukeni ubomi. Ukudanisa ujikeleze i-maypole ngelixa ulele kungakukhuthaza ukuba wamkele ubuchule bakho.
Uphawu lwephupha «umdaniso» - ukutolikwa kwengqondo
Ukudanisa ephupheni kutolika ukutolikwa kwengqondo yephupha njenge-vortex yobomi. Kule vortex kukho inkanuko, umnqweno, iimvakalelo ezinzulu kunye nokwabelana ngesondo. Unokuba ngumzekeliso "Umdaniso kwi-volcano" ibe ngubani ovela ephupheni kwaye ngubani Uxinzelelo inokubonakalisa kubomi bemihla ngemihla.
Omnye umfanekiso ophuphayo yibhola enkulu, edla ngokubhekisa kwi iminqweno yesini yi. Ukuba umdaniso wephupha wenzeka enkungwini okanye ebumnyameni, uphando lwamaphupha luyitolika njengophawu lweemvakalelo ezingaqinisekanga.
Abasetyhini ngokukodwa baphupha ngokudanisa. Ngokwesiqhelo lo mfanekiso wamaphupha walatha kwelinye Ukuziqonda yokuphupha, emelwe kumdaniso. Ukuba udanisa neqabane lakho ephupheni, uhlobo lomdaniso lubonisa indlela yokuziphatha kwendima el mundo ukuvuka. Nabani na okhokelela kwihlabathi lamaphupha uya kwenza okufanayo ebomini bokuvuka. Esinye isibini emva koko asihambelani kuphela kumdaniso wamaphupha.
Uphawu lwephupha «umdaniso» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, ukudanisa ngelixa ulele kubizwa njalo Isingqisho se impilo Itolikiwe
Kwakhona Tshintsha yendawo ngexesha lifanekiselwa ngumdaniso. Inkululeko kwimida yasemhlabeni kufuneka ifezekiswe ngomdaniso.